MATIU 15 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (MAT 15)
Jisọs zara ha sị, “Gịnị mekwaranụ unu ji na-emebi iwu Chineke nꞌihi omenala unu?
Nꞌọmenala unu onye mere ihe dị otu a mere ihe ziri ezi, mgbe ọ jụrụ iji ihe o nwere sọpụrụ ndị mụrụ ya. Gịnị ka nke a na-egosi? Ọ̀ bụghị na unu emeela ka iwu Chineke bụrụ ihe dị ala karịa omenala unu?
Pita sịrị ya, “Kọwaaranụ anyị ihe okwu a pụtara. ‘Ọ bụghị ihe mmadụ riri na-emerụ ya.’ ”
Jisọs jụrụ ya sị, “Ọ̀ bụ na ị ghọtaghị? Ọ̀ ga-abụ na o nweghị ihe dị iche nꞌetiti gị na ha nꞌịghọta eziokwu?
Ọ̀ ga-abụ na unu aghọtaghị na ihe ọ bụla mmadụ riri nꞌọnụ ya na-abanye ya nꞌime afọ, emesịa o sitekwa ya nꞌike pụọ?
Jisọs hapụrụ ebe ahụ lọghachi nꞌakụkụ osimiri Galili. Ọ rịgooro nꞌelu ugwu nꞌọdụ ala.